आर्थिक – Ramro Samachar
राम्रो समाचार	 Mar 4, 2021 0
साहस उर्जाले आइपीओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । कम्पनीले बोर्डसँग स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख कित्ता सेयर जारी गर्न अनुमति मागेको हो । बोर्डले अनुमति दिएपछि आइपीओ निष्कासनको…
अब मेरोशेयरको मोबाइल एपबाटै आईपिओ भर्न सकिने….
सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले मेरोशेयरको एपमा सीआस्वा सेवा थप गर्ने भएको छ। सिडीएसले यही साता एपमा सीआस्वा सेवा थप गर्न लागेको हो । सिडीएसका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले १-२ दिन मै एपमा सीआस्वा सेवा थप गर्न लागिएको बताए । एपमा सो सेवा…
हालसम्मकै ठूलो IPO ल्याउन पूर्वाधार बैंकले माग्यो अनुमति …
नेपालमा हालसम्मकै ठूलो संख्यामा प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निश्कासनका लागि पूर्वाधार बैंकले अनुमति मागेको छ। बैंकले कुल ८ करोड कित्ता सेयर निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ। बैंकले अंकित मूल्य १ सयका दरले ८ अर्ब रुपैयाँको सेयर…
ज्योति लाइफले ६६ लाख कित्ता आइपीओ निश्कासन गर्ने….
ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ ल्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरको ६६ लाख कित्ता आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति मागेको हो । बोर्डले अनुमति दिएपछि आइपीओ निष्कासनको थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ…
डिस होमको IPO आउँदै, अनुमति माग्न धितोपत्र बोर्ड पुग्यो कम्पनी….
मंसिर २२, काठमाण्डौ । टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी डिस होमले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने भएको छ । दुई अर्ब पूँजी रहेको डिस होमले करिब १० प्रतिशत भन्दा केही बढी सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने तयारी…
नेपालको सबैभन्दा ठूलो साधारण शेयर IPO पौषमा आउन सक्ने….
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले आफ्नो जारी पूँजीको ४० प्रतिशत साधारण शेयर निष्कासनको अनुमती माग्न धितोपत्र बोर्ड पुगेको छ । बैंकका अनुसार ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्ता शेयर निष्कासनको अनुमती धितोपत्र बोर्डसँग माग गरेको छ । स्वीकृत…
प्रभु लाइफले मंसिर २९ बाट ६० लाख कित्ता IPO खुला गर्ने…
प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सले मंसिर २९ गतेबाट आइपीओ बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरको कुल ६० लाख कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । यसमध्ये ३ लाख कित्ता कर्मचारी र ३ लाख कित्ता म्युचुअल फन्डहरुलाई छुट्याइएको छ । बाँकी ५४ लाख…
यतिबेला मानिसको विभिन्न खाले हल्लाले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर मूल्यमा केही उतार चढाव देखिएको छ । यतिबेला लगानीकर्ता कम्पनीको वास्तविकता बुझेर भन्दा पनि हल्लाको भरमा लागेर सेयर कारोबार गरिरहेका छन् । जसले कम्पनीको सेयर मूल्यलाई निकै…